Fanajariana ny kanto: mila mahatazona ny maha izy azy ny mpanakanto | NewsMada
Fanajariana ny kanto: mila mahatazona ny maha izy azy ny mpanakanto
Anisan’ny fady amin’ny fanajariana ny zavakanto, hono, ny fivadibadihana toa lela may! Raha ny fandinihana nataona mpikaroka iray, « io fivadibadihana io no mahatonga ny kanto sy ilay mpanakanto manao azy ho tsy tafatombina any amin’ny olona (mpijery, mpamaky, mpihaino…) ». Tsy mora anefa ny mitazona izany raha miainga amina kitsapatsapa ny mpanakanto iray kanefa efa miditra avy hatrany eo amin’ny fanapariahana ny vokatra.
« Rehefa mirotsaka dia mirotsaka tsy am-pisalasalana fa eny an-dalana, manatsara… Ny fanatsarana, tsy midika ho fivadibadihana… Tsy natao hanariana ny efa nijoroana tany am-piandohana ny fanatsarana », hoy hatrany ity mpandinika iray ity.
Nambarany fa raha hain’ny mpanakanto iray ny mitazona ny maha izy azy, ho sarotra amin’ny vanim-potoana ny handrava ny kanto naorin’ireny mpanakanto ireny. « Aza hadinoina fa ny fo sy ny fanahy ary ny vatana no voakitika raha vao miresaka zavakanto. Azo inoana fa raha niainga avy amina talenta ny mpanakanto iray maneho izay kantony izay, tsy maintsy misy voadona ny iray amin’ireo… Fa ny tena tsara, raha resahina ny zavakanto, ilay mandona fo sy fanahy no mateza », hoy ihany ity mpandinika ity.
Nanterina hatrany anefa fa mila fanatsarana ny zavakanto, noho izany, mila tovanana fianarana tsy miato izy ireny!